ABOn Daaw’annaa Prezidanti Obaamaan Itoophiyaatti karoorfate Balaaleffate
Date: July 5, 2015Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, 5 Adoolessa 2015) ABOn daaw’annaan Prezidanti Obaamaan dhuma baatii Adoolessaa 2015-tti Itophiyaatti adeemsisuuf karoorfate mormee ibsa baaseera.
ABOn ibsa Adoolessa 4 bara 2014 baase keessatti akka addeessetti daawannaan kun abbootii irree kan jajjabeessu, bittootni hacuuccaa fi saaminsa ummatoota irratti gaggeessan akka itti fufaniif kan hamilchiisu waan taheef jabeessee morma.
Kana malees, daawwannana kun hidhamtootaa Oromoo fi kanneen mirga falamatan biroo kuma kudhaniin lakkaawaman mana hidhaa keessatti akka tortoran irratti murtii gadi jabeessuu dha.
Ibsi kun itti dabalees, “imaammatni Ameerikaan hordoftu kan dantaa ummatootaa fi mirga namoomaa herrega keessa galchu osoo hin taane dantaa Ameerikaa qofa kan dursu tahuu caalaatti hubachiisa.” jechuun ejjannoo Ameerikaa qeeqee jira.
Hiree kanaanis mootummaan Ameerikaa karoora isaa kana akka irra deebi’ee ilaalu deddeebisee gaafata kan jedhe ABOn, kanuma waliin dantaan Ameerikaas kan caalaatti tikfamuu fi iggitii qabaatu abbootii irree jajjabeessuudhaan osoo hin taane qabsoo haqaa ummatootni bilisummaa fi sirna dimokiraasii dhugoomsuuf gaggeessan deggeruu fi jajjabeessuudhaan akka tahe hubachiiseera.
Hundaan olitti ammoo daaw’annaan akkanaa abbootii irreef yeroof kan fayyadu tahus qabsoo ummatootaa kan boodatti deebisuu hin dandeenye tahuu hubachiisa,” kan jedhe ibsi kun, “seenaan qabsoo ummatootaa kan dhiheenyatti naannoo kanatti tahaa tures, ummatoota mirga isaaniif falmatuuf murteeffatan humni dhaabuu danda’u kan hin jirre tahuu mirkaneessan,’ jechuun mormii qabu hubachiiseera.
Amerikaan yeroo mara dantaa ishii tikfatuuf jecha abbootii irree deeggarti, jechuun yeroo hedduu qeeqamaa jiraachuun ishii beekamaadha
Guutummaa ibsa kanaa: Ibsa_ABO_Daawannaa_Obama
Previous Previous post: Oromooti Sagal Hidhaa Hiikaman-OVR
Next Next post: Barattooti Oromoo Jaha Hidhaa Hiikaman